Usebenza njani nomyili kwiprojekthi yegraphic | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UPablo Gondar | | Idizayini yeMifanekiso, Ezahlukeneyo
Usebenza njani nomyili kwiprojekthi yegraphicokanye yinto efuna unxibelelwano nolwazi phakathi kwamaqela omabini ukuze kufikelelwe kwisiphumo esihle kubo bobabini, yiyo loo nto kunyanzelekile bazi izinto ezithile ezisisiseko zomsebenzi woyilo. Njengabaxhasi abangaqeqeshelwanga kuyilo kuyinto eqhelekileyo ukuba asazi ulwazi lobuchwephesha kuyilo lwegraphic, ngenxa yeso sizathu kuyacetyiswa ukuba ulandele Ingcebiso yomyili Ngawo onke amaxesha njengoko ibikhe yafumana uqeqesho lwangaphambili.
Ukusebenza nomthengi kuhlala kunzima kodwa sisonka somyili kunye nebhotolo, yiyo pack okuza nobuchwephesha kuba yonke into ayizukuzibeka emva kwescreen kodwa sizenze njengabacebisi, abathengisi kunye nabenzi bemilingo ngamanye amaxesha (abayili baya kuqonda). Nceda umxhasi ngenjongo yokuphucula umsebenzi phakathi kwamaqela omabini.
Xa sisebenza nomyili wegraphic sihlala senza iimpazamo ezininzi ezinokuthintelwa ngendlela elula kakhulu ukuba sifunda uthotho lwezinto ezisisiseko kwaye sihlala sizigcina engqondweni. Nanini na xa siza kuthumela uhlobo oluthile lwefayile kumyili, kuyacetyiswa ukuba uthethe naye kwangaphambili.
Ngamanye amaxesha kuya kufuneka thumela ilogo kuyilo lwegraphic Ukuze uyifake kuyilo, kulapho abathengi bahlala benza iimpazamo ezifanayo. I-logo akufuneki ithunyelwe ngo-Wmiselo kuba ikumgangatho ombi kwaye ayikhuthazwa loo nto. Kufuneka sihlale sizama thumela uphawu lwefomathi yevektha (AI, SVG..etc) ukuze ukwazi ukusebenza ngomgangatho ophezulu kakhulu. Kwimeko yokuyithumela kwenye ifomathi, kuyacetyiswa ukuba ukwenze ngaphandle kwemvelaphi.
Ilogo kufuneka ibe yinto ebonisa umgangatho kunye nobungcali, ngenxa yeso sizathu umthengi kufuneka aqinisekise ukuba ilogo yakhe ayifakwanga pixel kwaye ayilahli umgangatho nangaliphi na ixesha. Ayikokumcaphukisa umthengi kodwa kungcono ukuphucula iziphumo ezibonakalayo.
Iifoto kufuneka zihlala zisebenza kumgangatho olungileyo, umthengi kufuneka athumele imifanekiso kuyilo kumgangatho oncomekayo soloko uphepha iifoto zesisombululo esincinci nesisezantsi. Inkqubo ye- imifanekiso yinto ebalulekileyo kuyiloNgesi sizathu, kufuneka kuqinisekiswe ukuba umyili uyasebenza ngemifanekiso elungileyo.
Soloko kufuneka sebenza ngeefomathi ezingalahlekiyo (i-PSD, TIFT ... njl.) ukuze ubenakho ukuphinda ubambe imifanekiso ngezinto ezisemgangathweni ezisemgangathweni kunye nelahleko esezantsi kamva. Akufuneki sithumele imifanekiso ngamagama, iiPDF, izikrini kunye nezinto ezinje. Kwi-Intanethi sinokufumana umfanekiso webhanki yeinjini yokukhangela apho unokufumana khona zonke iintlobo zeefoto.
Kuthekani ukuba umthengi akanayo imifanekiso elungileyo?
Singasebenzisa iibhanki zemifanekiso ye-Intanethi. Okwangoku kwinethiwekhi sifumana amawaka eebhanki zemifanekiso simahla kunye nentlawulo esivumela ukuba sikhuphele zonke iintlobo zeefoto. Umyili unokukhangela imifanekiso yomthengi, okanye umxhasi angazikhangelela umyili.
Singafumana kwi-Intanethi ikhathalogu ye Khuphela iifonti ukunqanda ngale ndlela usebenzisa iifonti ezimbi kuyilo. Umthengi unokucebisa umyili Ngokufundisa izinto ezinokubakho malunga neefonti, kuyinyani ukuba umthengi akanalo uqeqesho, kodwa angabonisa ukuba zeziphi izimvo zakhe ngendlela ecacileyo enkosi kwiibhanki zeefonti anokuzifumana kumnatha.
Ukusebenza ngendlela enocwangco kubalulekile kubo bobabini abathengi kunye nomyili, ngenxa yeso sizathu uhlala uhlala sebenza usebenzisa iifolda ezi-odoliweyo nezinenombolo ngenjongo yokuba nolawulo olukhulu kuyo yonke ingcaciso. Kwizihlandlo ezininzi kuya kufuneka sisebenze kunye iintlobo ezininzi zeefayile kwangaxeshanye, ukuba asisebenzi ngokulandelelana thina singaphambana okanye okubi ngakumbi, ukuhambisa imveliso embi kumthengi. Masicinge ukuba siyalela umyili ukuba ayile ipowusta, kolu luyilo sinezalathiso, imifanekiso, izicatshulwa kunye neelogo ezixhasayo, kule meko into ekufuneka siyenzile kukwenza ifolda kuhlobo ngalunye lwefayile.
Iimpawu (ifomathi yevektha, umgangatho ophezulu, akukho mvelaphi)
izingqinisiso (Twilley, iifoto, njl.
izicatshulwa (apha ukuba singasebenzisa igama :)
Xa umyili esithumela uyilo kwaye sifuna ukwenza uhlobo oluthile lotshintsho kuba sibonile ukuba enye indawo ayisiqinisekisi, kuyacetyiswa umzobo ngaphezulu koyilo lwantlandlolo ukuphawula utshintsho, ngale ndlela kuphucula ukuqonda nonxibelelwano phakathi kwamaqela omabini. Ukuba senza utshintsho olubhalwe kwifayile ye- igama Kunzima ukuziqhelanisa neempazamo, kungcono ukwenza ifayile ye- umzobo okhawulezayo (kwidijithali okanye kwiphepha) ebonisa lonke utshintsho. Kuyacetyiswa kakhulu thetha nomyili ngaphambili ngqo ukunika ingxelo kolo tshintsho. Singasebenzisa skype ukukubonisa utshintsho ngexesha lokwenyani kwaye ngaloo ndlela uphucule umsebenzi wazo zombini.
Unxibelelwano luhlala lusisisekoNokuba kukwiprojekthi yomzobo okanye kulo naluphi na uhlobo lomsebenzi, ukunxibelelana ngokucacileyo kubalulekile. Kule nto sinezixhobo ezininzi zedijithali (skype, iinethiwekhi zokuncokola, Twilley... njl.njl) zonke ngenjongo zokuqonda omnye nomnye kangangoko kunokwenzeka xa usebenza. Kufuneka siyazi loo nto umyili asinguye kuphela umntu owenza iprojekthi kodwa ukwangumcebisi oko kunokusinceda ukuba sithathe izigqibo ezinxulumene neprojekthi ebonakalayo esikuyo. Kuyacetyiswa kakhulu ungatshintshi nantoni na kuyilo ngaphandle kokubonisana kuqala nomyiliAkufanele silibale ukuba umyili wegraphic unoqeqesho kwaye uyayazi into ayenzayo, ngaba ungazenza ngokwakho okanye ungaya kugqirha wotyando wokwenene? ​​Kwenzeka into efanayo nakwesi sihloko.
La umlo phakathi komyili nomthengi Yinto ehlala ihleli ikhona ngalo lonke ixesha, yiyo loo nto kufuneka sifunde ukusebenza ngeyona ndlela ikhululekileyo ukuze amaqela omabini aqondane kwaye afumane iziphumo ezilungileyo. Abayili behlabathi! Khumbula ukuba asingobabi belifa kuphela kodwa singootitshala abafundisa abathengi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Usebenza njani nomyili kwiprojekthi yegraphic
Inkcazo kunye neentlobo zebrendi
Uyenza njani into yokukhawulezisa ukucoca kwi-Photoshop?